'इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेटको जडान त सुरु भयो तर खोई ट्रयाकिङमसिन र रेडियो फ्रिक्वेन्सी ? | Corporate Nepal
‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेटको जडान त सुरु भयो तर खोई ट्रयाकिङमसिन र रेडियो फ्रिक्वेन्सी ?
काठमाडौँ: सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा सवारीसाधनमा उच्च प्रविधिको ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेट जडान थालेको छ। ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेट जडान सुरु भए पनि सवारीसाधन जाँचका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि यातायात विभागले प्रयोगमा ल्याएको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।